Avy Amin’ny Tontolon’ny Bilaogy ao Afrika Andrefana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Mey 2018 3:30 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka voalohany tamin'ny May 2006)
Manoratra bilaogy ao amin'ny Africa Update ny mpianatra iray ao amin'ny anjerimanontolon'i Ghanà sady manome sarisary momba ireo fanadinana famaranan-taona ao amin'ilay anjerimanontolo.
ankehitriny, tsarovy fa ny anjerimanontolon'i Ghana dia heverina ho iray amin'ireo anjerimanontolo tsara indrindra aty Afrika, iray tamin'ireo profesora nampianatra ahy hatreto no tonga hatramin'ny filazàna hoe heveriny fa tafiditra ho iray amin'ireo anjerimanotolo folo sangany eto amin'izao tontolo izao izy io. Ankehitriny, mampihomehy no fahitako izany, saingy hainareo izay azoko tao anatin'izanyyyy….manana karazana laza amin'ny maha-toeram-pianarana mendri-kaja azy izy.
Voalohany indrindra, nandritra ny enimbolana manontolo, nilazàna ireo vahiny mpianatra fa hatao amin'ny fotoana mitovy sy fanadinana anay saingy aminà toerana hafa tsy miaraka amin'ireo ghaneàna mpiara-nianatra taminay. Nohidiana taminà trano malalaka anankiray izahay mba hahafahana manasokajy misaraka ny fanadinana ataonay sy handehanana haingana kokoa….avy eo tamin'ny andro voalohany nanaovana fanadinana, nisy fampahafantarana natao printy nilaza fa ho tafaraka amin'ny rehetra ihany izahay, araka izany dia tsaratsara ho anay ny manao izay hahitàna ny toeram-panadinana….
Under the Acacias dia sahirantsaina momba ny fiparitahan'ny Gripam-Borona ao Burkina Faso
Marobe ireo toerana voamarina ho fanombohan'ilay H5N1, gripam-borona mahafaty ao Ouagadougou, renivohitr'i Burkina Faso, ilay tanàna faharoa ao Bobo-Dioulasso, sy ao Sabou, tanàna iray any amin'ny 100km andrefan'i Ouaga. Tamin'ny volana Aprily 2006 no hita ny tranga voalohany.
Tsy mbola nisy tranga hita tamin'ny olombelona aloha, saingy ireo fotodrafitrasa tsizarizary dia mety tsy ahafahana mitily azy ireny tsotra izao. Ny fifampikasohana akaiky eo amin'ny vahoaka noho ny fikirakiràna ireo akoho amam-borona dia hampitombo ny mety ho fifindràny amin'ny olombelona. 10 tapitrisa dolara no vinavina amin'ny tetibidin'ny ady hiatrehana ny gripam-borona ao Burkina Faso, fanamby iray ho an'ity firenena fahatelo mahantra indrindra erantany ity, na eo aza ny fanampian'i Frantsa sy Shina.
Niger Watch mizara sary iray misy solosaina finday misanda 100 dolara: maodely voalohany amin'ireo efa miasa amin'ny One Laptop Per Child (OLPC), na Solosaina iray Isaky ny Zaza Iray
avy amin'ny fanolorana ilay solosaina voalohany efa miasa amin'ilay solosaina finday misanda 100 Dolara tao amin'ny Vondron'asa Niarahan'ireo Firenena Fito androany. Lasa volomboasary ny maitso, ary nesorina ilay zavatra ahodin-tànana. Ampitahao amin'ireo tsotsotra misanda 400 dolara an'ny Intel sy ilay 185 dolara an'ny AMD.
Scribbles from the Den mamintina ny tatitry ny Amnesty International 2006 momba ny Zon'Olombelona ao Kamerona
Amnesty International (fandrakofana ireo hetsika teo anelanelan'ny Janoary – Desambra 2005)
Amnestyinternationallogo: Niharan'ny sotasota sy fanafihana ary notànana am-ponja ireo mpiaro zon'olombelona. Noho ny fironany ara-pananahany, notànana tsy ara-dalàna ny olona. Vondrona iray ahitàna ireo gadra noho ny politika, voaheloka taorian'ny fitsaràna nitanila sy natao tanaty fepetra nampahatahotra, ka namoizana ny telo tamin'izy ireo hatramin'ny 1999, nosakanana tsy avela hanan-jo hanao fampakarana didim-pitsaràna. Nosokafana ny fanadihadiana momba ireo fahafatesana vitsivitsy nitranga nandritra ny fitazonan'ny polisy izay voalaza fa niafara tamin'ny fampijaliana, saingy sady tsy nataon'ny tsy miankina ireny fanadihadiana ireny no tsy malalaka ihany koa. Maty sy naratra tanaty korontana tao am-ponja ireo voafonja, korontana nateraky ny fahafenoana tafahoatra sy ny fepetra henjana tany am-ponja.
Home of the mandinmories, raha sady miresaka politika ao Gambia, no manontany hoe Làlana Aiza no Hirosoana?
Betsaka ny olona hitantsika naratra tanaty korontana politika nitranga sy nitohy taorian'ny fisintahan'ny UDP/NRP tamin'ny NADD. Torotoro nanerana ny làlana ny fitiavantena. Dia inona? Tsy natao ho an'ireo manana fo marefo ny politika, ary ireo olobe rehetra avy amin'ny fanoherana ao Gambia mahafantatra tsara izany hatrany am-piandohàna.